Farshaxaniistaha reer Bulgaariya Christo ayaa kuu qaadaya intaad ku dhex socoto biyaha | Abuurista khadka tooska ah
Fikradda farshaxanka Christo Vladimirov waxay u soo bandhigeysaa booqdayaasha Lake Iseo ee Talyaaniga, laga bilaabo Juun 18 illaa Luulyo 3, fursad ay ku kulmaan dareen ah ku dhowaad socodka biyaha iyadoo bandhiggan loogu magac daray "The Pipe Piers". Riyo loogu talagalay farshaxanka illaa ay ugu dambayntii u rumowdo iyada oo ay dhiseen isaga iyo kooxdiisu.
Qaarkood tuuryo dahab ah oo lagu abuuray dharka iyo qaar ka mid ah xabadaha polyetylen-ka oo fidiya ilaa 3 kiiloomitir haro harada oo sameysma sawir joomatari ah oo aad u weyn iyo ku dhowaad riyood-marin si loo maro socod gaar ah oo kala duwan oo lagu dhex maro biyaha cusub. Hal-abuur farshaxan oo adeegsanaya deegaanka oo wax badan kaga duwan wixii aan beryahan ku aragnay sadarradan.
Waxay noqon doontaa sababta oo ah kuleylka nagu soo jiidanaaya soo jeedimahan fikradeed ee ay la jiraan asalka maxay yihiin Alps TalyaaniSoo-booqde kasta wuxuu ka lugeyn karaa dhul-weynaha laga bilaabo magaalada Suizano illaa jasiiradaha Monte Isola iyo San Paolo. Qalabka raadraaca gaarka ah iyo qalabka dhismaha ayaa u oggolaanaya inuu la socdo mowjadaha madaama ay ku dhowaanayaan dusha sare ee harada, sidoo kale waxay xoojinayaan dareenka markay ku socdaan jetkan gaarka ah.
Waxaan sidoo kale ka hadlaynaa 81-jir Bulgaria farshaxan ah oo loo aqoonsaday inuu yahay rakibidda ballaaran Talyaaniga iyo adduunka oo dhan. Wuxuu iskaashi la sameeyay xaaskiisa, farshaxanka Faransiiska ah Jeanne-Claude, horeyna 2005 wuxuu u rakibay shaqada "The Gates" ee ku taal Central Park ee magaalada New York. "The Floating Piers" waxay leedahay fikradeeda ah inay tahay shaqo asal ah oo farshaxan ah oo ay ka mid tahay soo saarista, rakibida iyo dib u warshadaynta dhamaan qaybaha loo baahan yahay si loo qabto shaqadan.
Ku rakibida qalabkan waxaan ku helaynaa waxa jira khibrad jireed taas oo xasiloonida harada iyo midabadaas buluuga ah laga raadinayo. Waa maxay waqtiga ka wanaagsan sanadka ee waqtigan, markaa haddii aad nasiib u yeelato inaad xilligan ag joogto, ha ku dheeraan imaatinka.
Waxaad leedahay facebookaga y boggaaga waayo, shaqada raac ee farshaxankan. Waana tan mid kale taas isticmaal meelo waaweyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » 'The Floating Piers' ayaa kugu qaadi doonta socod lug ah oo ku saabsan biyaha balligaan Talyaaniga ah
Pixar ma abuuri doono wax dambe oo dheeri ah kadib Extdibles 2